Join the Network • WithinReach WA
Shabakadda barnaamijka Help Me Grow ee Washington waxaa ku jira waalidiin, daryeeleyaal, adeeg bixiyeyaal iyo xirfadleyaal nooc walbe ah. Waxaan soo dhawaynaynaa dhammaan dadka danaynaya in ay nagu soo biiraan ee taageersan dhisidda nidaam habaysan oo ka kooban khayraad bulsho oo carruurta ka cawiya in ay caafimaad ku koraan. Waa kuwan qaar ka mid ah hababka aad kaga qayb gali karto; waxaan sii wadi doonnaa in aan boggan cusboonaysiinno oo aan ku darno fursado cusub.?
Noqo gacansaarle hoose (sub-affiliate): Gacansaarka hoose ama xiriirka hoose ee la yeesho waa iskaashi rasmi ah oo lala galo ururka gacansaarlaha gobolka ee barnaamijka Help Me Grow ee Washington, oo ah hay'adda WithinReach. Xidhiidh-hoosaadyadu waa wadashaqayn waaxeed oo maxalli ah oo ka shaqeeya hirgelinta qaabka Help Me Grow.
War dheeraad ah ka hel gacansaarka hoose
Isbedelada Kooxaha Waxqabadka Gobolka: Bishii Jannaayo 2022, Kooxaha Waxqabad ee Gobolka ayaa ka soo wareegay Help Me Grow (HMG) Kooxda Waxqabad ee Washington una guureen Kooxaha Shabakadda ee Bulshooyinka Carruurta (WCFC). Halka HMG ay ahaan doonto diiradda kooxaha, hadda ma noqon doonto sababta koowaad ee isu imaatinka. Hase yeeshe, ujeedada la wadaago waxay ku saabsan tahay horumarinta wanaagga carruurta, qoysaska, iyo bulshada si ballaaran.
Wax badan ka baro Kooxaha Shabakadda WCFC
La-hawlgalayaasha Help Me Grow Washington
Ma xiisaynaysaa la shaqaynta Help Me Grow Washington laakiin ma rabto inaad noqoto xidhiidh hoosaad? Waxaan rabnaa inaan kaa maqalno! Shaqaalaha ku xidhan Gobolka ayaa diyaar u ah inay kugula xidhmaan si ay wax badan uga bartaan yoolalkaaga iyo sida Help Me Grow u noqon karto qalab.